Kadinka | Kaasho Maanka
Ciddi-shabeel waxa uu joogaa magaalada Gaalkacyo ee ku taal bartamaha Soomaaliya. Sar siddeed dabaq ah buu dabaqa ugu hooseeya waxa uu baalrogayaa buug sawirro dumar ah. Sarta uu dabaqa ugu hooseeya joogo afar dabaq oo ka mid ahi waxa ay ku kiraysan yihiin shirkad weyn oo ka ganacsata jirka dumarka.Waxa uu Ciddishabeel jiraa toddobaatan iyo dhawr sano, weligiisna ma uu guursan. Meelaha ay joogaan...
Dadka ka ma ay dhexayso markii ay dhintaan waxa ay mudanayaan iyo in ay sanab dhuumanaya wada caabudaan. Khuraafaadka ay dadkeenna badankoodu riman yihiin waxaa in uu xaq yahay uga marag ah dad dhintay oo lafo ah iyo sanab aan muuqan oo cadow ciilqaba ah. Waa meesha ay maahmaahdu tahay “Beenlow nin dhintay iyo nin dheer buu marag gashadaa”. Wax kale oo markhaati ah ma ay hayaan dadka ku dheggan...